Waa maxay on imtixaanka TASC ah? | Warbixin ka USAHello | USAHello
Waa maxay on imtixaanka TASC ah?
Waa maxay on imtixaanka TASC ah? Habka ugu fiican ee si aad isugu diyaariso imtixaanka waa in la ogaado waa waxa imtixaanka TASC ah. Raadi jawaabaha su'aalaha ku saabsan waxa aad filan kartid in imtixaanka. Baro sida loo baran iyo barbarato imtixaanka.
Maxaan ka filan?
Waa maxay on imtixaanka TASC ah? Tani waa waxa aad filan karto:
Waxaad goobta imtixaanka-ansixiyey ah u tegi doonaa in ay qaataan imtixaanka TASC ah
Waxaad ma qaadan karaan imtixaanka TASC online
Waxaad qaadan kartaa imtixaanka on computer ama warqad
Waxaad qaadan kartaa imtixaanka ee Ingiriisi ama Isbaanish
Baaritaanku wuxuu leeyahay 5 qaybo ka mid, loo yaqaan-hoosaadyo - mid ka mid ah meel kasta content (maado)
imtixaanka oo dhan qaadataa 7 saacadood 30 daqiiqo. Laakiin waxaad qaadan kartaa 5 qaybo maalmo kala duwan. Tani waa wanaagsan yahay, waayo, shaqaalaha iyo waalidiinta mashquul. Waxaa loola jeedaa waxaad dooran kartaa inaad wax ka barato qayb kasta ee imtixaanka si gooni gooni ah. Ama waxaad ka qaadan kartaa qaybaha aad ogtahay, ka dibna ay isticmaalaan waqti aad wax ka barato, waayo meelaha ugu adag.
Sidee baan ku ogaan karaa haddii aan diyaar u ahay imtixaanka?
Waxaad qaadan kartaa imtixaan online lacag la'aan ah si loo arko haddii aad diyaar u tahay.
Miyaan imtixaanka warqad ama computer?
goobaha imtixaanka qaarkood waxay bixiyaan baaritaanka on computer, dadka kale bixiyaan baaritaanka warqad, iyo qaar ka mid ah waxay bixiyaan labada doorasho.
Haddii aad qaadato imtixaanka on computer ah, waa in aad hesho raaxo leh oo isticmaalaya qalab aad ka heli doontaa in imtixaanka. Waxaad isku dayi kartaa qalab ku saabsan TASC tababar qalab online. Haddii aad looma isticmaalo in kombiyuutarada, waxaad go'aansan kartaa in ay ku dhaqmaan goobta imtixaanka la computer dhabta ah, mouse iyo keyboard aad u isticmaali doonaa in baaritaanka.
Or, aad go'aan ku gaadhi kartaa waxa aad jeceshahay in tijaabada warqada. Isticmaal su'aalo rasmi ah dhaqanka si ay isugu dayaan soo baxay jawaabay TASC su'aalo ku saabsan warqadda.
Waxaad badan oo ku saabsan ka akhriyi kartaa imtixaanka TASC on warqad oo ku saabsan imtixaanka TASC online.
Waa maxay su'aalaha sida?
Waa maxay on imtixaanka TASC ah? imtixaanka TASC waxay leedahay noocyo kala duwan oo su'aalo ah. Qaar ka mid ah imtixaanka computer ah, halka qaar kalena ay yihiin tijaabada warqada.
su'aalo doorashooyin badan
su'aalo doorashooyin badan yihiin ee imtixaanada computer iyo warqad labada. A su'aal doorashooyin badan ku siinayaa doorashada ka mid ah jawaabaha. Su'aasha laga yaabo in ay ku saabsan qoraalka, ama waxay noqon kartaa oo ku saabsan sawir ama map. Waxaa laga yaabaa inay jaantuska a, oo ay ku jiraan shaxda ah, miis, ama garaaf. Hoos waxaa ku qoran qoraalka ama image noqon doonaa su'aal ka dibna liiska jawaabo, sida tusaale ahaan si xaq. Waxaad dooran xaq ka mid ah adigoo gujinaya goobaabin on computer ah, ama ku ganaya on warqad.
su'aalo Multiple-dooro eg su'aalaha kala doorashada badan-. Laakiin waxay ku warsan in ay doortaan laba ama saddex jawaabaha saxda ah halkii ay kaliya hal.
Waxa ugu fiican oo ku saabsan su'aalo doorashooyin badan iyo su'aalo badan-la doortay waa in jawaabaha had iyo jeer waxaa idinka soo hor jeedda. Waa inaad u ogaado mid ka mid ah xaq u(s). Si arrintan loo sameeyo, aad u baahan tahay si ay u eegaan si taxadar leh macluumaadka lagu siiyo. aad si taxadir leh u akhri su'aasha, aad. Waxaa laga yaabaa in aad trick waxoogaa yar - tusaale ahaan, waxay dhihi kara, Taas oo jawaab run ma aha?
jawaabaha Gridded (jawaabo) waxaa loo isticmaalaa su'aalo xisaabta labadaba warqad iyo imtixaanada computer ah. Waxaad u baahan doontaa in la isticmaalaa si loo this jidadka galaya jawaabahaaga ka hor inta aanad qaadan imtixaanka xisaabta aad.
Iyada oo jawaabaha gridded, waxaad gelaysaa jawaabtaada laba jeer. Waxaad warqad u qori tiro kasta ama calaamad in square ah hogaanka. Kolkaasuu mar kale aad u buuxisid by Vivtoria goobada tiro isku mid ah calaamad in column hoose. Hoos waxaa ku qoran tusaale ka imtixaanka warqadda xisaabta TASC waayo jawaabta 43.8. Roobka ayaa u eg this on imtixaanka kombiyuutarka aad u.
Jiid-iyo-dhibic oo su'aalo computer-kaliya kale
su'aalo Jiid-iyo-dhibic yihiin oo kaliya on imtixaanka computer ah. imtixaanka computer wuxuu isticmaalaa waxa calls TASC “technology-wanaajiyey” su'aalo. technology computer The kuu ogolaanayaa inaad wax shaashadda beddelo. Isticmaalka jiirka, aad u guurto doonaa sanaadiiqda qoraalka waa ka meesha su'aal meesha jawaab. Ama waxaad laga yaabaa sawiri line u dhexeeya sanduuqyada. Waxaa jiri doona tilmaamaha ka mid ah su'aasha. Haddii aad ogtahay sida loo isticmaalo mouse a, technology waa mid aad u aasaasi ah oo fudud.
su'aalo qoraal ah
Baaritaanku TASC ku jiri doona su'aalo ah ee aad u baahan tahay in ay jawaab u qor. Waxa ay noqon kartaa jawaab gaaban ama waxay noqon kartaa maqaalka ah.
jawaab dhisay: gaaban oo qoran yihiin ama ku qortay jawaabaha su'aalaha.
degdeg ah qoraal (Qormada): twaxaa lagu dheer qoraal ah ama jawaab ku qortay in shay in aad imtixaanka qoraalka. Waxaad heli doontaa qoro weedho yar adiga kugu saabsan mawduuc waxaa la siiyaa.
Isku day inaad iyaga soo baxay!
Waxaad qaadan kartaa imtixaanka TASC ah ee warqadda ama computer ah. Isku day inaad ka qaabab kala duwan - waxaad awoodi doontaa inaad buuxiso dhammaan noocyada su'aasha waxay noqon doontaa haddii waqti hore aad ku dhaqmaan!
Download ah su'aalo rasmi ah muunad in ay isku dayaan TASC su'aalo ku saabsan warqadda.
Isticmaal TASC tababar qalab online in ay isku dayaan TASC su'aalo ah oo ku saabsan computer ah. Waxaad u baahan doontaa in ay isticmaalaan browser Google Chrome isku day su'aalahan.
Maxay yihiin maadooyinka?
Waa maxay on imtixaanka TASC ah? Waxaa jira shan-hoosaadyo (maadooyinka) imtixaanka TASC ah: cilmiga bulshada, sayniska, xisaabta (xisaabta gaaban), akhriska iyo qoraalka.
Waa maxay on imtixaanka TASC ah: Reading
imtixaanka akhriska wuxuu qaadanayaa 85 daqiiqo. Waxay leedahay su'aalaha kala doorashada badan-, jiididda iyo dhibic ama waxyaabo la mid ah imtixaanka computer ah, iyo su'aasha ah in loo baahan yahay jawaab dhisay.
Waxaad ka jawaabi doonaa waxyaabaha ku saabsan qoraalka waxaad ka akhrisan. Waxaad ka akhriyi doonaa 75 % qoraalka macluumaad, sida articles wargeyska ama maqaalo xaqiiq ah. Waxaad ka akhriyi doonaa 24 % text suugaanta, sida cry tixaha, ruwaayado ama gabayo.
Baaritaanku wuxuu doonaa:
fahamka: fahmo waxa ay dabada ku leeyahay
falanqaynta: baadhaya sida iyo sababta faahfaahinta waxaa loo isticmaalaa
codsiga: wareejinta fikrado ka mid ah xaalladaha soo maray
Avv: isku soo dubaridka fikrado si ay u fahmaan micnaha weyn
Waxaad baran kartaa badan oo ku saabsan subtest reading TASC ah.
Waa maxay on imtixaanka TASC ah: Qoraalka
Imtixaanka qorista wuxuu socdaa 110 daqiiqo. Part 1 qaadataa 65 daqiiqo. Waxay leedahay su'aalaha kala doorashada badan-iyo jiididda iyo dhibic ama waxyaabo la mid ah imtixaanka computer ah. Part 2 qaadataa 45 daqiiqo oo uu leeyahay hal su'aal maqaalka ku qoran.
Part 1 doonaa:
naxwaha / isticmaalka (30%)
xaraf / xarakayn / higaada (25%)
aqoonta luqada (30%)
Part 2 (maqaalka) la dhaliyay doonaa:
Ururka cad oo istiraatiiji ah
horumarinta dhamaystiran oo fikradaha
Qaab dhismeedka xukunka, xarakayn, naxwaha, doorashada eray, iyo higgaadin sax ah
Waxaad baran kartaa badan oo ku saabsan TASC qoraal subtest ah.
Waa maxay on imtixaanka TASC ah: cilmiga bulshada
The imtixaanka cilmiga bulshada socdaa 75 daqiiqo. Waxay leedahay su'aalaha kala doorashada badan-, jiididda iyo dhibic ama waxyaabo la mid ah imtixaanka computer ah, iyo su'aasha ah in loo baahan yahay jawaab dhisay.
Waqtiga baaritaanka, kuu jawaabi doonaa su'aalo US iyo taariikhda dunida on, dhaqaalaha, juqraafiga, cilmiga bulshada, iyo dawladda. Baaritaanku wuxuu cabbiri doonaa fahamka mabaadi'da asaasiga ah ee mid kasta oo ka mid ah goobaha kuwa. Waxaad raadin doonaa meelihii qoraalka, sawirada, garaafyada, iyo gooldhalinta. Waxaad baran kartaa dheeraad ah oo ku saabsan waxbarashada TASC Bulshada subtest.
Waa maxay on imtixaanka TASC ah: xisaabta
Imtixaanka xisaabta socdaa 105 daqiiqo. Waayo, qayb 1 (55 daqiiqo) waxaad isticmaali calculator a. Waayo, qayb 2 (50 daqiiqo) calculators looma oggola. Waxaa jira su'aalaha kala doorashada badan, su'aalaha jawaabta gridded, iyo jiididda iyo dhibic ama waxyaabo la mid ah imtixaanka computer ah.
Imtixaanka xisaabta wuxuu diiradda ku saabsan xirfadaha xisaabeed. Waxa kale oo uu cabbiri doonaa fahamka:
xisaabta aasaasiga ah
version The computer imtixaanka xisaabta ayaa calculator ku-screen. Waxaad ku tababaran kartaa calculator online qaybta xisaabta ah ee TASC tababar qalab online. Haddii aad doorbidayso calculator a Xararad in an calculator on-screen, waydii goobta imtixaanka haddii aad ka mid ah liiska hoos ku keeni kartaa adiga kuu gaar ah.
Haddii aad qaadatid imtixaanka warqaddan dhiibay, waxaad u baahan doontaa inaad keento calculator a Xararad. Texas Instrument Model TI-30XS waa calculator loogu doorbido imtixaanka TASC ah, laakiin waxaa jira dhamaystiran ah liiska calculators ansixiyay.
Waxaad baran kartaa badan oo ku saabsan subtest TASC Xisaabta.
Waa maxay on imtixaanka TASC ah: Science
imtixaanka sayniska soconaysaa 75 daqiiqo. Waxay leedahay su'aalaha kala doorashada badan-iyo jiididda iyo dhibic ama waxyaabo la mid ah imtixaanka computer ah.
imtixaanka sayniska ayaa diiradda saari doona sayniska jirka, sayniska nolosha, iyo dhulka iyo meel sayniska. Waxaad u baahan doontaa in la fahmo qaar ka mid ah fikradaha sayniska aasaasiga ah iyo hab cilmiyaysan. Waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay inaad ugu yeerto aqoonta, aqoonta iyo xirfadaha, ama ka codsan sababaynta. Waxaad baran kartaa badan oo ku saabsan subtest TASC Science.
Sidee imtixaanada dhaliyay?
Imtixaanada waxa dhaliyay on qiyaasta ah 300 in 800 waayo, mid kasta oo subtest. The dhibcaha ugu yaraan ku dhaco waa:
• Xisaabta 500
• Sayniska 500
• Cilmiga Bulshada 500
• Qoraalka 500 iyo ugu yaraan 2 ka mid ah 8 dhibcood suurto gal on maqaalka
Marka aad mari dhan shan-hoosaadyo, aad ka gudubto imtixaanka TASC ah.
Waxaan qabaa su'aalo ku saabsan sida loo qaato imtixaanka TASC ee aan gobolka.
Waad awoodaa aad u ogaato sida loo qaato ee HAWSHA imtixaanka ee gobolka.
qaado our imtixaanka online free dhaqanka si aad u ogaato haddii aad diyaar u tahay imtixaan yihiin. Haddii aad diyaar u yihiin, waxaan ku tusi doonaa tallaabooyinka soo socda.
Bilow our class online lacag la'aan ah haddii aad u baahan tahay inaad wax ka barato si aad imtixaanka. mar walba bilow iyo tegi kartaa xawaaraha aad.
Baro sida in ay ka jawaabaan su'aalaha kala doorashada badan
Waxaan halkaan u joognaa si Dhawdihiin inaad Liibaantaane!
Waa maxay GED®?
Waa maxay TASC?
Waa maxay HiSet?